यस्तो अवस्थामा अर्ग्यानिक सागतरकारी कहाँ पाउने ?
अब आफ्नै कौसीमा खेती गर्ने कि ? कसरी गर्ने त कौसीमा खेती ?
गड्यौले मल बनाउन भान्साबाट निस्केको फोहोरलाई एउटा काठको वाकसमा तह मिलाएर राख्ने । सामान्य तया दुई रुपैयाँ प्रति गोटा पाइने गड्यौला आधा आधा मिटर लम्वाई चौडाई भएको बाकसमा प्रति तहमा ८ देखि १० वटा सम्म राखेर छोड्दा गड्यौलाले फोहोर खाँदै जाने र मल तयार हुँदा फोहोर सबै माटोको दाना दाना जस्तो बन्न पुग्छ। यसका लागि भान्छाबाट निस्कने सजिलै र कुहिने फोहोरलाई एक ठाउँमा राखेर बक्सा आकारको जुनसुकै भाडोमा सजिलै गड्यौले मल बनाउन सकिन्छ ।
Don't Miss it यी हुन् आपतकालिन उपचारमा प्रयोग हुने ११ जडिबुटी
Up Next गिजाकाे समस्या देखी छाती दुख्ने समस्या सम्म राहात मिल्छ ल्वाङ चिया पिउनुदा, जानिराखाैँ